Baiboly pejy 685 - Ny Baiboly
Voalohany < 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 Manaraka Farany
1 Timote toko 4
Ny tokony hoenti-manohitra ny fampianarana.
1Milaza marina ny Fanahy fa any aoriana any, dia hiala amin'ny finoana ny sasany, ka hanaraka fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demony, 2izay haelin'ny mpihatsaravelatsihy sy mpandainga, dia olona voamariky ny vy mahamay ny fieritreretany; 3handrara tsy hanambady izy, ary hampifady ny hanina nataon'Andriamanitra horaisin'ny mpino sy ny mpahalala ny marina amim-pisaorana. 4Tsara avokoa anefa ny zavatra nataon'Andriamanitra, ka tsy misy tokony hatao fady, rahefa raisina amim-pisaorana koa, 5satria mahamasina ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana.
6Izany no ampianaro ny rahalahy, dia ho mpandraharaha tsaran'ny Kristy Jesoa hianao, mivelona amin'ny teny finoana mbamin'ny fampianarana tsara efa narahinao. 7Fa ireny anganongano foana fanaom-bavy antitra ireny dia lavo; ary mampiasà ny tenanao amin'ny fivavahana. 8Satria ny asa ara-batana dia mahasoa kely foana, fa ny fivavahana no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, izy no manana ny teny fampanantenana, na amin'ny fiainana ankehitriny, na amin'ny fiainana ho avy. 9Eny, teny marina tokoa izany, ka tokony hekena amim-pitokiana, 10fa izany indrindra no ikelezanay aina sy iadianay, dia noho izahay manantena an'Andriamanitra velona, Mpamonjy ny olombelona rehetra, indrindra fa ny mpino.
11Izany àry no zavatra handidianao sy hampianarinao. 12Aoka tsy hisy olona hanamavo anao noho ny fahatanoranao, fa aoka ho fakan-tahaka ho an'ny mpino hianao amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, ary amin'ny fahadiovana. 13Mandra-pihaviko, milozòha amin'ny famakiam-boky sy fananarana ary fampianarana. 14Aza atao tan-tsirambina ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao, izay nomena anao tamin'ny faminaniana maro mbamin'ny fametrahan-tànan'ireo Pretra tafangona. 15Diniho izany zavatra izany, ary araiketo amin'izany ny tenanao manontolo, mba hiharihary amin'ny olona ny fandrosoanao. 16Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ary mahareta tsara amin'izany, fa raha manao izany hianao, dia hahavonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.
1 Timote toko 5
Ny tokony hatao amin'ny olona manaraka ny toetrany avy, fa indrindra ny mpitondra-tena - Ny amin'ny Pretra.
1Aza anarina mafy loatra ny anti-dahy, fa anaro toy ny ray izy; ary ny tovolahy, toy ny rahalahy; 2ny anti-bavy, toy ny reny; ny tovovavy, toy ny anabavy, amim-pahadiovana tanteraka.
3Omeo voninahitra ny mpitondratena, izay tena mpitondratena tokoa. 4Fa raha misy mpitondratena manan-janaka na zafy kosa, dia aoka ho ireo aloha no hianatra hanaja ny fianakaviany, ka hamaly babena ny ray aman-dreniny, fa izany no sitrak'Andriamanitra. 5Ny hoe mpitondratena tokoa, dia honjohonjon'izy irery no sisa, Andriamanitra no hany antenainy, ka maharitra amin'ny fangatahana amam-pivavahana andro aman'alina izy; 6fa izay manaram-po amin'ny fahafinaretana foana, dia toa velona, nefa maty tenany. 7Izany àry no andidio azy ireo, mba tsy hananany tsiny; 8fa izay tsy miahy ny ao aminy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandà ny finoana, ka ratsy noho ny tsy mpino aza.
9Ny soratana ho isan'ny mpitondratena dia aoka tsy ho latsaka ny enim-polo taona, tsy nanambady afa-tsy indray mandeha, 10tsara laza amin'ny asa soa: namelon-janaka, nampiantrano vahiny, nanasa tongotry ny olo-masina, niantra ny ory, nazoto tamin'ny asa soa rehetra. 11Fa aza mandray ny mpitondratena tanora, satria rahefa voan'ny filan'ny nofo ka tofoky ny Kristy ireny, dia ta-hanambady indray, 12ka meloka, fa nivadika ny teny napetrany voalohany; 13sady midonana-poana koa ireny, ka rafitra ny hitety trano, dia tsy midonana-poana fotsiny, fa be taria, misafo ny an'olona, miresaka ny tsy tokony horesahina. 14Koa tiako aza hanam-bady ireny mbola tanora ireny, mba hanan-janaka, sy hitondra ny tokan-tranony; ary tsy hanome basy hamelezan'ny fahavalo vava ratsy, 15satria efa nisy lasa nivily sahady hanaraka an'i Satana. 16Raha misy mpino manan-kavana mpitondratena, dia aoka izy no hamelona azy, mba tsy hahavaky tratra ny Eglizy, sy hahazoany mamelona izay tena mpitondratena.
17Izay Pretra tsara fitondra dia mendrika hajan-dray aman-dreny avo sasaka; indrindra fa ireo milozoka mitory teny sy mampianatra, 18fa hoy ny Soratra Masina hoe: Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary; ary koa: Ny mpiasa dia mendrika ny tambiny. 19Aza mandray teny fiampangana Pretra, raha tsy misy vavolombelona roa na telo; 20ka izay manota, dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra, mba hampatahotra ny sasany koa.
21Mihanta aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesoa-Kristy ary ny anjely olom-pinidy aho, mba tsy hanananao olon-tiana, na hasianao fiangarana kely akory ny fitandremana izany zavatra izany. 22Aza malaky mametra-tànana amin'iza na iza, ary aza miombona ota amin'olona, fa tahirizo madio ny tenanao. 23Aza dia tsy misotro afa-tsy rano, fa mba misotroa divay kely koa, noho ny ambavafonao sy ny fahosaosanao matetika. 24Ny fahotan'ny sasany dia miharihary ka mialoha ny fitsarana; fa ny an'ny sasany kosa, dia manaraka ato aoriana; 25toy izany koa ny asa tsara: misy miharihary, misy tsy toy izany aloha, nefa tsy ho azo afenina lalandava.
3Raha misy mampianatra zavatra hafa noho izany, ka tsy manaiky ny teny marin'i Jesoa-Kristy Tompontsika, sy ny fampianarana mampanaja an'Andriamanitra, 4dia olona mpieboebo foana izany, sy tsy mahalala na inona na inona, fa adalan'ady hevitra aman'ady teny, izay miteraka fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, 5fifanoherana tsy misy farany, fanaon'ny olona efa ratsy saina sy nialan'ny fahamarinana, ka manao ny fivavahana ho filan-karena. 6Eny, harem-be tokoa ny fahazotoa-mivavaka, omban'ny fianinana; 7satria tsy nitondra na inona na inona isika no niditra tamin'izao tontolo izao, ka iaraha-mahita fa tsy hahatondra na inona na inona koa no hiala eto: 8koa rahefa manan-kohanina sy hitafiana, dia aoka hianina amin'izany. 9Fa izay te-hanan-karena, dia tafalatsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika amam-pilàna maro tsy misy heviny sy mampidi-doza, izay mandentika ny olona amin'ny fandringanana amam-pahaverezana.
Pejy: Voalohany < 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 1.5437 seconds